ပိုက်ဆံရှိမှ စာသင်နိုင်တော့မှာလား??? [Freetalk]
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Learning Knowledge » ပိုက်ဆံရှိမှ စာသင်နိုင်တော့မှာလား??? [Freetalk]
1 ပိုက်ဆံရှိမှ စာသင်နိုင်တော့မှာလား??? [Freetalk] on 2nd October 2009, 5:27 pm
2 Re: ပိုက်ဆံရှိမှ စာသင်နိုင်တော့မှာလား??? [Freetalk] on 2nd October 2009, 6:06 pm
Myanmaritpro မှာလဲအဲ့လိုဆွေးနွေးချက်တစ်ခုတွေ့ခဲ့တယ် ။ MITPro admin တွေရဲ့  discussion တွေကိုတွေ့ခဲ့တာပါ .ဆွေးနွေးချက်ထဲမှာတော့ ဒီလိုစရိတ်မတတ်နိုင်တဲ့လူငယ်တွေ နဲ့အထူးသဖြင့် တချို့ နယ်ဝေးကနေ ရန်ကုန်ထိလာရမယ့် လူငယ်လေးတွေအတွက်ပါစဉ်းစားထားပေးတာတွေ့ ရပါတယ် (ဖိုရမ်ထဲမှာပေါ့နော်) ။ဘယ်လိုလောက်ထိလဲဆို ဒီလိုမတတ်နိုင်တဲ့ထဲက ထူးချွန်တဲ့လူငယ်လေးတွေ အတွက် ရန်ပုံငွေ ရှာပေးမယ့်သဘောမျိုး ဒါမှမဟုတ် နယ်ဝေးဒေသတွေမှာ သင်တန်းဖွင့်ပေးမယ့် အစီစဉ်တွေလိုမျိုး အွန်လိုင်းမှာပဲမနက်ခင်းပိုင်းတွေမှာ သူတို့ကိုယ်တိုင်သင်ခန်းစာပေးမယ့် အစီစဉ်မျိုးတွေ ညိုနေတာတော့တွေ့ ပါတယ် ။ သင်တန်းစရိတ်တွေကတော့ တကယ်ပဲ တုန်လှုပ်စရာပါပဲ ..
3 Re: ပိုက်ဆံရှိမှ စာသင်နိုင်တော့မှာလား??? [Freetalk] on 2nd October 2009, 6:16 pm
aqua wrote: စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်..တကယ်လဲအဲ့လိုလူငယ်လေးတွေအများကြီးမြင်နေရပါတယ်
MyanmarITPro မှာလည်း ဒီလိုမျိုး ဆွေးနွေးချက်ရှိတယ်လား။
ကျနော်အဲဒီ့ထဲမရောက်တာကြာသွားတော့ တော်တော် အဆက်ပြတ်နေပြီ။ အခုသွားရှာလိုက်ဦးမယ်။
အဆင်ပြေရင်တော့ ကျနော့်ဆွေးနွေးချက်နဲ့ သူတို့ရဲ့ အစီအစဉ်ကို ပူးပေါင်းဖို့ ညှိကြည့်လိုက်ဦးမယ်။
သူတို့ စီစဉ်နေတာတွေသာ တကယ်ဖြစ်လာရင်တော့ ကျနော်တို့လိုလူတွေ ပညာရပြီပေါ့။
4 Re: ပိုက်ဆံရှိမှ စာသင်နိုင်တော့မှာလား??? [Freetalk] on 2nd October 2009, 6:25 pm
ဒီမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုပ်ပါလား...ဥပမာ Programming ဆိုရင် $ƴǩǾ က VB စာအုပ်ထုတ်ပေးမယ်ပြောတယ်..အဲ့လိုမျိုး learning လေးတွေ ဒီထဲမှာ လုပ်လိုက်ပါလား...ဖိုရမ်လည်း လှုပ်လှုပ်ရှား၂ ဖြစ်တာပေါ့...ဒီထဲမှာဝင်နေကြတဲ့သူတွေလည်း ၀င်ရေးနိုင်တဲ့သူတွေချည်းပါပဲ..
Last edited by §T on 2nd October 2009, 6:34 pm; edited 1 time in total
5 Re: ပိုက်ဆံရှိမှ စာသင်နိုင်တော့မှာလား??? [Freetalk] on 2nd October 2009, 6:31 pm
ဟဲဟဲ [Only admins are allowed to see this link] မသိချင်ယောင်ဆောင်မနေပါနဲ့ကွာ။
ကျနော်ဒီနေရာမှာဘဲ ကျနော်တို့ ဖိုရမ်ရဲ့ UnderGround Project တစ်ခုကို ကြေငြာပါ့မယ်။
ကျနော်တို့ ဖိုရမ်ထဲမှာ အခုဆိုရင် Team လေးတစ်ခု ဖွဲ့ပြီးတော့ မြန်မာလို Tutorial တွေကို ရေးပေးနေပါတယ်။
တော်တော်လေးစုံလာရင်တော့ ကျနော်တို့ အပြင်မှာ ဖြန့်ဝေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ့ Team ထဲဝင်ချင်ရင်တော့ ကျနော့်ဆီကို စာရင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
Team နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စည်းကမ်းတွေကတော့ [Only admins are allowed to see this link] တို့ ထုတ်တာပါ.
6 Re: ပိုက်ဆံရှိမှ စာသင်နိုင်တော့မှာလား??? [Freetalk] on 15th January 2010, 11:38 am
ခုလိုပြောပေးကြတဲ. အတွက်ကျေးဇူတင်ပါတယ်။ ဘာကြောင်.လည်းဆိုတော. ကျွန်တော်နဲ.တူလို.ပါပဲ။ သက်သာပြီးထိရောက်တဲ.သင်တန်း or စာမေးပွဲများရှိရင်လည်းပြောပေးကြပါ။ ဥပမာ ကျွန်တော်က hardware နှင်. networking ကို oါသနာပါတယ်. .အဲဒါပတ်သက်ပြီး အဆင်ပြေမယ်. ဟာပေါ.
7 Re: ပိုက်ဆံရှိမှ စာသင်နိုင်တော့မှာလား??? [Freetalk] on 15th January 2010, 12:37 pm
Level အလိုက်ခွဲပြီး သင်ကြားပြသနိုင်ရင် အားလုံးကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်
တစ်ချို့ဆို အွင်္န်လိုင်းသုံးပြီး မတတ်တာတွေရှိပါတယ်
Basic က စပြီး Module တစ်ခုစီကို သက်ဆိုင်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ သင်ကြားနိုင်အောင်
ကျနေ်ာတို့ MITR Forum ဟာ အောင်မြင်လာမယ်၊ ငွေကြေးမတတ်နိုင်တဲ့ လူတွေအတွက်လည်း ပညာကူသိုလ်လည်းပေးနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်
8 Re: ပိုက်ဆံရှိမှ စာသင်နိုင်တော့မှာလား??? [Freetalk] on 15th January 2010, 5:37 pm
နောက်ဆိုရင် ကျနော်တို့ Tutorial ရေးမယ့် ပုံစံကိုလည်း ပြောင်းလဲဖို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။
မြန်မာဖို၇မ်တွေရဲ့ ထုံးစံအရ ကျူတိုရီရယ်တစ်ခုကို ရေးတဲ့သူက ဒီအတိုင်းရေးပြသွားပြီး ကျန်တဲ့သူက ဖတ်ချင်ဖတ် မဖတ်ချင်နေ ပုံစံကို ပြောင်းလဲဖို့ ကျနော် စဉ်းစားထားတာတွေရှိပါတယ်။
နောက်ပြီး ကျနော်လည်း အသက်နည်းနည်းကြီးလာလို့ ကျောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင် ပညာဒါနသင်တန်းလေးတွေပါ လုပ်ပေးဖို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။ (လောလောဆယ် အသက်ကတော့ လူမလေး ၊ေ-ွးမခန့်ဆိုတော့ ၊ အဲလိုသွားလုပ်ရင် လှောင်ခံရမှာ ၊ ခုတောင် ဖိုရမ်လေးတစ်ခု လုပ်ပေးမိပါတယ်။ အသက်ငယ်ငယ်လေးက ဘာတတ်လို့လဲဆိုတဲ့ စတိုင်နဲ့ ၀ိုင်းလှောင်တဲ့သူတွေနဲ့ တွေ့နေရတာ တော်တော်များပြီ။)
9 Re: ပိုက်ဆံရှိမှ စာသင်နိုင်တော့မှာလား??? [Freetalk] on 15th January 2010, 8:00 pm
ဒီ post ကို တွေ့ပြီး ကျွန်တော်လဲ တော်တော် နောင်တရခဲ့ တဲ့ အကြောင်းပါ...........ကျွန်တော်လဲ သင်တန်းတွေ အများကြီးတက်ခဲ့ပါတယ်.... ဘာရလဲ ဆိုတော့ ဘာမှမရခဲ့ဘူး.... ဘာတွေသင်ခန်းစာရခဲ့လည်းလို့ မေးရင်တော့ ဖြေစရာက သင်တန်းဆိုတာလဲ ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်ရတာ ဆိုတဲ့အသိကလေးတော့ ရခဲ့တယ်..
ကျွန်တော်လည်း ဥာဏ်မှိသလောက်လေးတော့ ဆွေးနွေး ပေးပါ့မယ်............
အဓိက တစ်ခုပါ.... လိုင်းမှာတာနဲ့ ဘာမှ လုပ် ချင် စိတ်ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူး... ကိုယ်ဘာ လုပ် ချင် လဲ ဆိုတာ သေချာစဉ်းစားပါ
နည်းပညာသမားတွေအတွက် အခြေခံ က အရေးအကြီးဆုံးပါ.....သိန်းချီကုန်ပြီးမှ အခြေံ ကောင်းမယ် ဆိုတဲ့ အတွေး ကို ခေါင်းထဲက အရင်ထုတ်ပစ်လိုက်..... Internet ကြီးရှိနေသရွေ့ ဆရာ မရှားဘူး...
်forum တွေကို join ပြီး ... ကိုယ်က ဘာတွေ လုပ် ချင်လဲ... ဘာတွေလေ့လာသင့်လဲ ဆိုတာ ကို အကြံဥာဏ်ယူပြီး
စလေ့လာပါ။ မသိတာတွေရှိရင်တော့ forum တွေမှာ ပညာရှင်တွေ ရှိပါတယ်... သူတို့ကိုအကူအညီတောင်း ပါ...
ဒီ forum မှာ ဆိုရင် $ƴǩǾ တို့လို ဆရာကျတဲ့သူတွေရှိပါတယ်...
ကိုယ့် ကို ကို အခြေခံတွေ ကျွမ်း ကျင် ပြီ ဆိုရင်တော့ toturial တွေ နဲ့ ကိုယ် အရည်အချင်း ကိုယ် စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်....
ဘာတွေ လိုအပ်လည်း ဆိုရင်တော့ လေ့လာကြိုးစားမှု နှင့် အချိန်ပေးဆပ်နိုင်မှုပါပဲ
ကြိုးစားရင်တော့ သင်တန်း ဆိုတာနဲ့ပိုက် ဆံ ဆို တာ က ကိုယ့်ရဲ့ နောက် ကို ရောက် သွားပါလိမ့်မယ်
ဒီလောက် ဆို တော် ပြီ
ကိုဇေ တော့ ဘာတွေ မဟုတ်တာ ရေးနေလဲလို့ ပြောတော့ မယ်... ;P
သင်တန်း ကို ပိုက် ပိုက် လှုခြင်းမှ ကင်ဝေးကြပါစေ
10 Re: ပိုက်ဆံရှိမှ စာသင်နိုင်တော့မှာလား??? [Freetalk] on 15th January 2010, 8:15 pm
အခုလို ၀င်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ ကိုဇေ ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အစ်ကိုပြောသွားတဲ့ အချက်လေးတွေက မှန်ပါတယ်။
တကယ်တော့ သင်တန်းဆိုတာ မတက်သင့်ဘူးလို့လည်း မပြောလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အရမ်းကာရော စွတ်ပြီး မတက်သင့်ဘူးဗျ။
သင်တန်းဆိုတာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ လမ်းကြောင်းတစ်ခုခုပေါ်ရောက်အောင် တွန်းတင်ပေးမယ့် နေရာတစ်နေရာပါဘဲ။
အဲဒီ့လိုင်းပေါ်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ်ရဲ့ လေ့လာမှုကြိုးစားမှုက အများကြီးလိုလာပါပြီ။
တကယ်တော့ Programming သင်ချင်တယ်ဆိုရင် တက္ကသိုလ်တက်တဲ့သူဆို ရင်တော့ ကျောင်းက သင်တာတွေကို အရင်ဆုံး အခြေခံရအောင်ယူ ၊ ပြီးရင် လက်တွေ့လုပ်ကြည့်။ အခက်အခဲတွေဖြစ်လာရင် ဖိုရမ်တွေကို ၀င် ၊ များများမေး ၊ သူများမေးထားတာရှိရင်လည်း ကိုယ်သိထားတာဆို ပြန်ဖြေပေးလိုက်။ အဲဒါဆိုရင် ကိုယ်လည်း တကယ်တတ်ကျွမ်းတဲ့သူဖြစ်လာမှာပါ။
တကယ်တော့ တက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဆို သင်တန်းဆိုတာ လိုကိုမလိုတာပါ။
အဲလို ကွန်ပြူတာပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျောင်းတွေမတက်ဘဲ ရိုးရိုး အဝေးသင်လောက် တတ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်လည်း ကိုယ်တိုင်က လေ့လာသင်ယူနိုင်မှုအားကောင်းတဲ့သူ ၊ ကြိုးစားတဲ့သူဆိုရင် Internet သုံးတတ်ရုံနဲ့တင် လိုချင်တဲ့ ပညာ ကို ရနိုင်ပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ်ဘူး သူများသင်ပေးမှ လမ်းစရနိုင်မယ့်သူမျိုးဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံး Basic သင်တန်းတစ်ခုခုတက် ၊ အဲဒီ့ ကိုယ်လုပ်ချင်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အနည်းငယ် သိလာပြီ ။ ဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာလည်း သိနေပြီဆိုရင်တော့ Online ပေါ်သာလာခဲ့ပေတော့ ၊ ဖိုရမ်တွေရှိပါတယ်။ အခုချိန်မှာဆိုရင် မြန်မာဖိုရမ်တွေလည်း တော်တော်လေးများနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုက်တဲ့နေရာမှာမေးကြပါ။ ဖြေပေးပါလိမ့်မယ်။
အဲလိုမှမဟုတ်ဘဲ ၊ သင်တန်းတစ်ခါဖွင့် တစ်ခါလိုက်တတ်နေရင်တော့...... မိဘရှာထားတာသာ ကုန်သွားမယ် ဘာမှတတ်လာမှာမဟုတ်လို့ ထင်မြင်မိပါကြောင်းပြောရင်းနဲ့ ဒီနေ့တော့ အချိန်မရှိလို့ ခေတ္တရပ်ပါရစေ။
စာကြွင်း ။ ။ ကိုဇေ ရေ ကျနော်က ဘာမှ ဆရာမကျပါဘူး။ ဖိုရမ်ကိုလည်း တတ်လွန်းလို့လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ ဆရာကျတဲ့သူတွေ လာဆွေးနွေးကြတာလေးတွေ ကြည့်ရင်း တခြားသူတွေလည်း ပညာရစေချင်လို့ လုပ်ထားတာပါ။ မြန်မာလူမျိူးထဲမှာလဲ တော်တဲ့သူတွေ အများကြီးဗျို့။ တစ်ရက် အွန်လိုင်းဝင်လေ ၊ တစ်ခါတွေ့လေပါဘဲဗျာ။ တကယ်ကို တော်ကြပါပေတယ်။
11 Re: ပိုက်ဆံရှိမှ စာသင်နိုင်တော့မှာလား??? [Freetalk] on 13th December 2010, 12:52 am
ကျွန်တော်ကတော့ အထူးသဖြင့် Hardware ပိုင်းကို ပိုပြီးအားသန်ပါတယ်။ ၀ါသနာကြောင့်လည်းထင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း Service ဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အပါအ၀င် Service ဆိုင်တော်တော်များများမှာရှိတဲ့ Hardware Service ၀န်ဆောင်မှုတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ပျက်တဲ့ပစ္စည်းကို ဖြုတ်ပြီး အခြားအသစ်တစ်ခုနဲ့ လဲလှယ်ပေးတာပါပဲ။
Customer က သူ့စက်ပုံးကြီးကိုဖြုတ်ပြီး ဆိုင်ကိုမလာတယ်၊ `ကျွန်တော့် စက်က ညကတောင်အလုပ်လုပ်နေသေးတယ်၊ အခု မနက်ကျတော့ ဖွင့်လိုက်တာဘာမှ တက်မလာတော့ဘူး´ ...
အစရှိသဖြင့် ပြောတယ်ဆိုပါတော့ဗျာ...။ အဲဒီတော့ service man က အဆင့်ဆင့် စမ်းသပ်တယ်။ သေသေချာချာကို စမ်းသပ်တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ သူအဖြေရသွားတယ်။
`မိတ်ဆွေ စက်က motherboard ပျက်တာ´ ပေါ့ .... ။ တကယ်လည်း motherboard ပျက်ပါတယ်။ သေသေချာချာကိုပျက်ပါတယ်ပဲ ဆိုပါတော့....။
အခုလို အခြေအနေမှာဆို တော်တန်ရုံ service man တွေက motherboard ကို တစ်ခါတည်းပဲ ဖြုတ်လဲပေးပြီး လိုအပ်တာတွေကိုဆက်လုပ်သွားမှာပါ။
အဲ ... နည်းနည်းစိတ်ရှည်တဲ့ service man ဆိုရင်တော့ motherboard analyzer card တွေနဲ့ စမ်းပြီး motherboard ပေါ်က ဘယ်အပိုင်းကနေ ဘယ်အပိုင်းကို ကူးတဲ့နေရာမှာ Error ပြတယ်၊
အဲဒီ Error ဟာ ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ပြီးတော့ motherboard ပေါ်က Capacitor လေးတွေကို မီတာလေးတွေနဲ့ ထောက်ပြီး ဖြုတ်လဲချင်လဲလိမ့်ဦးမယ် ....။
အဲဒီလိုနဲ့ အဆင်ပြေသွားရင်တော့ Customer အတွက် ၀မ်းသာစရာပါပဲ။ ပြင်ရတဲ့ သူအတွက်ကတော့ ကြိုးစားရတာ ကျေနပ်စရာပါပဲဗျာ။
အဲဒီလိုမဟုတ်ရင်တော့ ...... ဟူး......။ Motherboard အသစ်တစ်ခုသာ အစားထိုးတပ်လိုက်ရတာပါပဲဗျာ.....။
ပြောရင်တော့ဗျာ ကျွန်တော်တို့ စက်ပြင်တယ်ဆိုတာကြီးက ဘယ်အပိုင်းက ပျက်တာလည်းကိုသိအောင်လုပ်၊ သိရင် (ပျက်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းပါဝင်တဲ့ အကန့်တစ်ခုလုံး) အသစ်တစ်ခု အစားထိုး၊ အားလုံးကောင်းသွားရော....(ပညာရှင်များကို စော်ကားခြင်းမဟုတ်ပါ) ။ သိပ်လွယ်လွန်းနေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာတောင်မှ အဲဒီလို motherboard တွေနဲ့ အခြားစပ်ဆက်ပစ္စည်းတွေကို ကိုယ်တိုင်ထုတ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့က ပစ္စည်းလေးအစားထိုးပြီးလဲလှည် နိုင်ရုံနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျေနပ်နေကြပါတယ်။
စောစောကပြောခဲ့သလို motherboard ပျက်ရင် Boardတစ်ခုလုံး လဲစရာမလိုပဲကောင်းအောင်ပြင်နိုင်တဲ့ နည်းပညာတွေရှိပါတယ်။ အရှင်းဆုံးပြောရရင် motherboard ပေါ်က Controller Chip တွေကိုတောင်မှ ကိုယ်တိုင်ဖြုတ်ပြီး လဲနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ နည်းပညာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အခြားနိုင်ငံတွေကို အားငယ်စရာလုံးဝမလိုပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ဘက်ကသာ အချင်းချင်းနည်းပညာသာမက၊ ငွေအား၊ လူအားများပါ တက်စွမ်းသမျှ လက်ဆင့်ကမ်း မျှဝေနေရင် ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲဗျာ...။
အောက်ကဆိုဒ်လေးကတော့ ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့နည်းပညာတွေကိုသင်ကြားပေးတဲ့ e-learning ဆိုဒ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ laptop တွေကို micro-controller chip တွေ
ကအစ ဖြုတ်တပ်ပြင်ဆင်ပုံတွေတောင်မှ အဲဒီဆိုဒ်မှာ သင်ယူနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တော်တော်ပျော်သွားတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ ပညာရပ်အစစ်တွေ ရပြီပေါ့....။
ဒါပေမယ့်ဗျာ ... အရမ်းဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာက အဲဒီဆိုဒ်က Course တွေရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ပါပဲ။ ပိုက်ဆံရှိရင်တောင်မှပဲ ကျွန်တော်(တို့) အနေနဲ့ သင်ကြားမှုမလုပ်နိုင်နိုင်တဲ့ pay service တွေဖြစ်နေပါတယ်ဗျာ။
ရေမြေခြားက သူငယ်ချင်းများ အဲဒီဆိုဒ်လေးကို ရောက်အောင်သွားပါ။ Student form ဖြည့်ပြီး ကျောင်းအပ်ပါ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့လို ငေးကြည့်နေရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ပညာတွေလက်ဆင့်ကမ်းပေးကြပါဗျာ။
အဲဒီဆိုဒ်မှာ Course တွေအကုန်လုံးကို *.PDF ဖိုင်အနေနဲ့လည်း Download လုပ်နိုင်တယ်။
အဲဒီ *.PDF ဖိုင်လေးရခဲ့ရင်လေ.... ကျွန်တော်တို့ကို ပြန်လည်ပြီးမျှဝေပေးကြပါဗျာ... ... ...။
12 Re: ပိုက်ဆံရှိမှ စာသင်နိုင်တော့မှာလား??? [Freetalk] on 21st January 2011, 1:48 pm
ဒီ Post လေးကို ကျနော Myanmar-network ထဲမှာ ကို ညအလင်္ကာနဲ့ တစ်ခါ ဆွေးနွေးဖူးပါတယ် ။
အကိုပြောသလိုပဲ ကျနောတို့ ဆီမှာ ပိုက်ဆံ ရှိမှ စာသင်နိုင်တော့မှာလား ဆိုတဲ့ အခြေအနေ တစ်ရပ်ကို တော်တော်များများ ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဗျ ။ Certificate တစ်ခုကို သိန်းချီ ပေးဝယ်နေရတဲ့ အခြေအနေမျိုး ဗျ။ အခု ဒီ Post ကို စရေးတဲ့ Founder ရဲ့ သူငယ်ချင်းးလို ပဲ ကျနောလည်း SE တတ်မလို့ သင်တန်း ကြေး လာစုံစမ်းဖူးတယ် ။ သင်တန်းက တော့ 1 နှစ်ဗျ ။ Fees ကတော့ မနည်းဘူး $800 တဲ့ ။ Certificate ကတော့ မလေးရှားးပ ပေးမှာ လို့တော့ ပြောတာပဲ ။ ကျနော် လည်း တတ်မလို့ပဲ ဒါပေမယ့် ကျနော့ အမေတွေနဲ့ ပြန်တိုင်ပင်ရသေးတယ်ပေါ့ဗျာ ။ $800 ဆိုတဲ့ အားက မနည်းဘူးဗျ။ ပြီးတော့ ကျတော်တို့ လို ရန်ကုန် Local က မဟုတ်တဲ့ နယ်က သူတွေ အတွက်တော့ အခက်အခဲ ရှိတာပေါ့ဗျာ ။ ဒါနဲ့ ကျနော လည်း SE သင်တန်းကို မတတ်ဖြစ်သေးဘူးဗျ။ ကျနောတင်မဟုတ်ဘူး IT ကို လေ့လာချင်တဲ့ ပြီးတော့ ပိုက်ဆံ သိပ်မကုန်ပဲ နဲ့ ကိုဝါသနာပါတဲ့ IT ပညာရပ်တွေကို လေ့လာချင်တဲ့လူငယ်တွေ ကျနောတို့ နိုင်ငံမှာ အများကြီးပဲ ရှိမယ်ထင်ပီး ဒီ စကားဝိုင်းလေးမှာ ပါဝင်ဆွေးနွေးတာပါ ။ (ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ)
13 Re: ပိုက်ဆံရှိမှ စာသင်နိုင်တော့မှာလား??? [Freetalk] on 22nd January 2011, 9:32 am
တစ်ခါတစ်လေကျတော့ ကိုယ့်ဆီမှာ အခွင့်အရေးမရှိဘူး၊ နည်းတယ်ဆိုတာမှန်ပေမယ့် အဲ့ဒါကိုပဲထိုင်အော်နေလို့မပြီး သေးပါဘူး။ တစ်ခါတုန်းက စဉ်းစားဘူးတာရှိတယ်။ အင်တာနက်ဆိုင်တစ်ခုက လခ ငါးသောင်းနဲ့ ကမ်းလှမ်းဖူးလာတာရှိ
တယ်။ ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။ အဲ့မှာဝင်လုပ်ရင် အတွေ့အကြုံရမယ်။ ရှစ်လကိုးလကြာမယ်။ အဲ့ပညာကို အပြင်မှာ သင်ရင်70000 ဝင်းကျင်ရှိ
မယ်ပေါ့။ ဒါဆိုနှစ်လလောက် ပဲအချိန်ကုန်မယ်။ အဲ့တော့ ခုဟာက ပိုက်ဆံရှိရင် ပညာင်မရတော့ဘူးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။
ပိုက်ဆံရှိလား? ဒါဆိုရင်အချိန်သက်သာမယ်။ ပိုက်ဆံမရှိရင် အောက်ခြေကဝင်။ အဲ့မှာ
လိုနေတာတစ်ခုက အောက်ခြေကဝင်ဖို့ သတ္တိရှိဖို့ပဲ။ လူငယ်တော်တော်များများက အဲ့သတ္တိမရှိတာတွေ့ရတယ်။
နောက်ပြီး အဲ့ပညာကိုသင်မှာဘာလုပ်ဖို့လဲ။ အဲ့ဟာကလဲ အရေးကြီးတယ်။ ဝါသနာရော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖို့ရောနဲ့ ကိုက်ညီလား၊
ူဒါမှမဟုတ် ဝါသနာပဲလား။ လူများယောင်လို့လိုက်ယောင်တာလား၊ များသေားအားဖြင့်က သူများယောင်လို့ လိုက်ယောင်နေကြတာများတယ်။
ဘ၀မှာ အချိန်သိပ်မရှိဘူး။ သင်တန်းတွေလဲတက် လက်မှတ်တွေလဲအများကြီးရ အချိန်တွေလဲကုန် ပြီးတော့မှာ လုပ်ငန်းခွင်မှာ တကယ်ဝင်နေ
တဲံ့လူနဲ့ ယှဉ်တော့ အဲ့လောက် ကျွမ်းကျင်မှုကမူကမရှိ။ အဲ့လိုမျိုးသူငယ်ချင်း တွေလဲရှိတယ်။ ပြီးတော့ သင်တန်းတက်လိုက်တယ်ပေါ့။ ပြီးတော့
advence ဆက်မတတ်နိုင်ဘူးဆိုပါဆို့။ self-study လုပ်ပေါ့။ အဲ့လို မျိုးကိုယ်တိုင်လေ့လာဖို့ရော တစ်ကယ် ကြိုးစားဖူးလား။ sulf-study တစ်ကယ်
ုလုပ်ရင် သင်တန်းတက်တာထက် အများကြီး အကျိုးရှိပါတယ်။ တစ်ကယ်လဲတက်တယ်။ နားမလည်တာဆို သိတဲ့လူရှာမေး။ ကိုယ်တစ်ကယ်
တတ်မြောက်ချင်ရင် အဲ့လိုမျိုး လဲ အပင်ပန်းခံနိုင်ရမယ်။ အလုပ်ဝင်လုပ် အောက်ခြေကနေတစ်ဆင့်ချင်တက် အဲ့လိုကြီးလဲပြောနေတာမဟုတ်ဘူး
ကိုယ့်စူးစမ်းမှု ကလဲရှိသေးတယ်။ ရန်ကုန်မှာဆို ပညာဒါနကျောင်းတွေပေါ ပါတယ်။ ရန်ကုန်နေတဲ့သူဆိုရင် ပိုတောင်အဆင်ပြေသေးတယ်။
ပြီးရင် ပညာသင်ဆုတွေလဲရှိသေးတယ်။ အွန်လိုင်းတက်ပြီး ချက်တင်ပဲထိုင်နေရင် စာဖတ်ဖို့ပျင်းနေရင်တော့ ဒီတိုင်းပဲသွားနေမှာပဲ။
ကိုယ့်ဘာသာ english ကို self-study လုပ်နေပြီး အွန်လိုင်းကနေပညာသင်ဆုရှာပြီးတော့ ယိုးဒယားမှာ ပညာသင်ဆုနဲ့ကျောင်းသွားတက်နေ
တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အဲ့လိုမျိုးလဲ ကိုယ်ကရှာတတ်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ်တတ်မြောက်ချင်တဲ့ ပညာတစ်ခုကို သင်ဖို့
ပိုက်ဆံထက် ကိုယ့်ရဲ့ ကြိုးစားမှုနဲ့ တတ်မြောက်ချင်စိတ်ကပဲ အဓိက ကျတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံက25% ကြိုးစားမှုက75%ပေါ့။
14 Re: ပိုက်ဆံရှိမှ စာသင်နိုင်တော့မှာလား??? [Freetalk] on 23rd January 2011, 5:29 pm
ပိုက်ဆံရှိမှဘဲ စာသင်နိုင်တော့မှာလားဆိုတာလေးပါ အခုဆိုရင်လူငယ်တော်တော်များများ
အကောင်ထည်စဖော်နေပါပြီ ပိုက်ဆံရှိစရာမလိုပါ တကယ်သင်မယ်ဆိုရင် ပညာတော်တော်များများ
ကျွန်တော်ဆိုရင် သင်ပေးမဲ့သူနဲ့မကြုံကြိုက်မိလို့ အင်တာနက်ကမိတ်ဆွေတွေရဲ့နည်းပညာတွေ
15 Re: ပိုက်ဆံရှိမှ စာသင်နိုင်တော့မှာလား??? [Freetalk]